Isitulo setafile sangaphandle sefenitshala kunye netafile yesitulo segadi yeRattan, Ifenitshala yangaphandle evela eChina kwiTopChinaSupplier.com
Foshan Shiguang fanicha yefanitshala, Ltd.
Ifanitshala yangaphandle, uSihlalo we-Deck, isitulo se-Basket, isitulo se-Cane, isofa yangaphandle
Intshona Melika, uMzantsi Melika
I-SHIGUANG Fumiture co, i-LTD isekwe ukusukela ngo-2005. Okokuqala yayidume ngefenitshala yefenitshala yefashoni eyenziwe ngokwesiko. Inkqubo yayo yemveliso yokujonga ngobuchule, kunye nezinto ezikumgangatho ophezulu ...
Indawo yokubonelela Furniture Ifenitshala yangaphandle Indawo yokuphumla yangaphandle yefanitshala yesihlalo kunye netafile yegadi yesitadi segadi
Indawo yokuphumla yangaphandle yefanitshala yesihlalo kunye netafile yegadi yesitadi segadi
1 Set I-US $ 80.00 / iseti
IRattan / i-Wicker, ifenitshala yangaphandle yeRattan
Guangdong, China (wase)
Ngaphandle, ihotele, iiholide, ipatio.
Ifenitshala yangaphandle yeRattan
Bona ezinye zoyilo
Foshan Shiguang Furniture Co., Ltd ibekwe kwiSithili Shunde, Foshan City, nto leyo edume baInkampani yethu iqhubela phambili kuphuhliso kunye nokuveliswa kwefenitshala ye-wicker.Izinto ezinemfashini, ubunewunewu, kunye nomgangatho ophezulu wokusebenza ukuya kwixabiso, ke iyathandwa kumazwe angaphezu kwama-30 nakwimimandla enjengeYurophu, i I-United States, i-Afrika, i-mpuma ye-Asiya ne-Russia.
Inkampani ayiyiyo oI-nly inenkqubo yolawulo olungcono, kodwa ikwanamandla okusebenza, asebenzayo kunye neqela le-R & D. baIminyaka eli-16 yamava emveliso yefenitshala, inkampani iye yenza inkqubo esemgangathweni yokuvelisa. Iyahambelana noqeqesho lwangaphakathiimigangatho elawula ngokungqongqo, kubandakanya ukukhethwa kwezinto, ukusika, ukugaya ukubhaka, ukuvavanya kunye nokupakisha. Inkqubo nganye iye yavavanywa ngokungqongqo, yiyo loo nto imveliso iqinisekisiwe yi-SGS.
Umbuzo: Ngaba u-manufactory?
A: ewe, singumntu ochazayoukuvelisa nal. Iimveliso zethu ziyathengisa zishushu eTshayina nakwamanye amazwe ngomgangatho onokuthenjwa kunye nexabiso lokhuphiswano.
Q: Ngaba uyayamkela isampulu yoku-odola?
A: Ewe, i-odolo yesampulu yamkelekile, nangona kunjalo umthengi kufuneka ahlawule iindleko zemveliso kunye neendleko zokuhambisa.
Umbuzo: Liliphi ixesha lokuhambisa kwakho?
A: Iimfuno iintsuku ezingama-20-25 emva kokufumana intlawulo kunye nokuzoba ivenkilefirm / ied.
Q: Zithini izinto zakho zokuhlawula?
A: Imali, Ali Express Escrow, Paypal, West Union, MoNey Gram, Ukudluliselwa kweBhanki, T / T kunye no-L / C zonke ziyafumaneka.
Q: Yintoni iwaranti yakho?
A: iminyaka emi-2 iwaranti.
Q: Uphila njaniNika ubungakanani ngesiqhelo?
A: Sihlala sijonga umgangatho nganye nganye ngaphambi kokupakisha ngaphandle kokuba kukho inani elikhulu kakhulu kwaye siya kukhangela ngepesenti ngokufanelekileyo.
Ulwazi oluthe kratya, nceda contact kuthi.
I-Rattan Outdoor Patio Wicker Isitulo esixhonyayo Swing iseti yabantu abadala
Ifanitshala yangaphandle yangoku I-Hanging chair e-Rattan Wicker yeGadi
US $ 138.00 / Iiseti
Itafile ye-aluminiyam yesakhelo se-aluminium kunye nezitulo ezinama-wicker
US $ 257.00 / Beka
Ifenitshala yangaphandle Iibhaskiti zeevenkile ezingama-Wicker ama-Egg Swing
isitulo somntwana omncinci
isitulo esikhulu se-wicker
isitulo sabantwana esi-wicker
isitulo se-ikea wicker
Isitulo sangaphandle sefenitshala kunye netafile
US $ 80.00 / Beka
Iindonga zangaphandle zeBalcony Ifenitshala ejikeleze iRattan Nest
US $ 285.00 / Beka
Ifenitshala yangaphandle yeebhedi ezihonjisiweyo zangaphandle
US $ 635.00 / Beka
Uyilo lwala maxesha lwe-rattan sun lounger chaise furniture
US $ 5235.00 / Iiseti
Uyilo olutsha lweRattan ngaphandle kwelanga iLounger Wicker Poo
US $ 150.00 / Beka
UNks SG FOSHAN
Immimiselo & nemiqathango Isibhengezo umthetho wabucala Foshan Shiguang fanicha yefanitshala, Ltd.